Filtrer les éléments par date : samedi, 15 février 2020
samedi, 15 février 2020 21:57
Kitra - "Coupe Arabe U20": Djibouti no hifanandrina voalohany amin’ny Barea
Nigadona tao Riyadh androany vao maraimben’ity sabotsy 15 febroary ity ny delegasiona Malagasy hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra « Coupe Arabe U20 ».
Ny ekipan’i Djibouti no hifanandrinana voalohany amin’ny Barea U20 ny Alatsinainy 17 febroary. Nitsapa ny kianja « Al Riyadh Club » izay hanaovana ny lalao ny solontena malagasy androany ary hitohy rahampitso.
samedi, 15 février 2020 21:55
Frantsa: Nisy Sinoa iray matin’ny « Coronavirus »
Lahiantitra iray, mpizahatany teratany Sinoa, 80 taona, no matin’ny coronavirus omaly zoma. Nanamafy izany ny minisitry ny fahasalamana frantsay Agnès Buzyn. Ity no fahafatesana voalohany ivelan’i Azia, hatramin’ny desambra 2019 niandohan’ity valanaretina ity tao Wuhan, Chine.
Tamin’ny 23 janoary no tonga tao Frantsa ity Sinoa lahy 80 taona mpizahatany ity niaraka tamin’ny zanany vavy iray, 50 taona. Niditra hopitaly tao Bichat-Paris izy ny 25 janoary rehefa nahitana soritr’aretina « coronavirus » dia izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
Tsy misy ahiana koa ny fahasalaman’ilay zanany, izay niditra hopitaly niaraka tamin’ny rainy tao Bichat ihany koa.
samedi, 15 février 2020 18:26
Antananarivo Renivohitra: Notoloran’ny « Fondation VISEO » fiara sy moto ny Polisy Monisipaly sy ny Mpamonjy voina
Nahazo fiara sy moto ny Polisy Monisipaly sy ny Mpamonjy voina, vokatry ny tohana nataon’ny « Fondation VISEO » ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Ivondronan’ny orinasa Ocean Trade, Havamad, Continental Auto ary IzyRent ny vondrona VISEO, ka i Moustafa Hiridjee no filohany. Tamin’ny 8 mey 2018 izy ireo no nanangana ny « Fondation VISEO » izay manao asa soa samihafa miantefa amin’ny lafiny sosialy.
samedi, 15 février 2020 10:42
Kraomita Malagasy: Mibaby trosa 101 miliara Ariary sy fatiantoka 39 miliara Ariary
Nihaona an-databatra boribory, tao Ampandrianomby, ny zoma 14 febroary 2020, ny avy amin'ny Ministeran'ny harena an-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika notarihin'ny Minisitra Ravokatra Fidiniavo, ny Filankevi-pitantanana, ny Tale Jeneraly sy ireo solontenan'ny mpiasan’ny orinasa Kraomita Malagasy (KRAOMA) avy any Brieville sy eto Antananarivo ho famahana ny olana sedrain’ity orinasam-panjakana ity amin’izao fotoana izao.
Laharam-pahamehana ny hahatongavan'ny vatsy ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany tra-boina noho ny tondra-drano tany Brieville sy Andriamena, manampy trotraka izany ny tsy fandraisana karama. Mahakasika ity farany dia voavaha ny fandoavana ny volana Oktobra, Novambra sy Desambra; ary misy koa ny fiahiana ireo mpiasa tra-boina.
samedi, 15 février 2020 10:30
Andekaleka: Hetahetan’ny mponina ny hamerenana zotran-dalamby
Maniry fatratra ny hamerenana indray ny fiarandalamby mpitatitra olona ny mponina aty Andekaleka. Nanomboka ny taona 2018 izy ireo no tsy nisy fiarandalamby nitatitra intsony ka sahirana amin'ny famoahana vokatra sy ny fitsaboana marary.
samedi, 15 février 2020 10:15
Egypta: Firenena afrikana voalohany nahitana mararin’ny « coronavirus »
Nanamafy ny fisian’ny olona iray voan’ny « coronavirus » ny ministera ejipsiana misahana ny fahasalamana, omaly 14 febroary. Teratany vahiny ilay marary hoy ny fanambarana, tsy nambara kosa ny firenena fiavian’io marary io.
samedi, 15 février 2020 09:53
Toamasina: Tontosa omaly ny fametrahana ny samboadin’ny Ben’ny tanàna Nantenaina
Tontosa ny Zoma 14 febroary 2020 ny lanonana fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny Ben’ny tanàna, Rakotonirina Nantenaina Herilala.
Minisitra telo avy ao amin’ny governemanta, dia ny Minisitry ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, Naharimamy Lucien Irmah ; ny Minisitry ny Fanabeazam-Pirenena sy ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa, Iarintsambatra Rijasoa Andriamanana Josoa ary ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Ahmad Ahmad, no nanotrona ny lanonana.
samedi, 15 février 2020 09:23
Coronavirus: Nitarin’ny Air Madagascar hatramin'ny 30 aprily ny fampiatoana ny sidina Antananarivo - Guangzhou
Nanapa-kevitra ny kaompaniam-pitaterana anabakabaka nasionaly Air Madagascar fa hanitatra ny fampiatoana vonjimaika ny sidina Antananarivo – Guangzhou – Antananarivo, mandrampahatonga ny 30 aprily 2020 raha toa ka tokony ho tapitra tamin'ny 29 febroary 2020 izany. Ny antony dia noho ilay valanaretina « Coronavirus » any Chine izay tsy mbola voafehy hatreto.
Namoaka fanambarana mikasika izany ny Air Madagascar omaly, ary nandray fepetra ho an’ireo mpandeha efa nanao famandriahana ka tafiditra anatin’io fe-potoana io ; na ahemotra amin’ny daty hafa ny famandrihana na averina manontolo ny vidin’ny tapakilany.
Hatramin'ity maraina ity dia miisa 1519 ny Sinoa namoy ny ainy vokatr’ity « coronavirus » ity. Etsy ankilany, ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) dia milaza amin’ny fomba miolaka fa « aloha loatra raha izao no hilaza fa voafehy ity valanaretina ity ».
samedi, 15 février 2020 09:22
Journée internationale du cancer de l’enfant.